Ufumana malini umyili wegraphic eSpain | Abadali be-Intanethi
Ngaba uyathanda ukuzoba, ubugcisa, uphuhliso lwezazisi? Ngaba uyila, ucokisekile emsebenzini wakho kwaye uyathanda ukuthoba iindlela ezintsha kuyilo? Ukuba uphendule yonke le nto ngo-ewe, ukuba ngumyili wegraphic yindlela yakho elungileyo.
Ukuba ngumyili wegraphic kunokuba a umsebenzi olungileyo kakhulu ukhetho, kuba ngendalo yakho unokunxibelelana ngemibono kunye nemiyalezo ngendalo yakho.
Ukungena kwihlabathi loyilo kubandakanya okuninzi uqeqesho, unyamezelo kunye nokuba kuhlaziyo oluqhubekayo lolwazi, ekubeni ilihlabathi elitshintsha rhoqo kwaye likhuphisana kakhulu. Kuya kufuneka ugqame kwaye ugqame kokhuphisana nabo ukuze ube nokufikelela kwawona mathuba emisebenzi angcono athiwe thaca kuwe.
Kweli nqaku siza kulahla iingongoma ezahlukeneyo ngokubhekiselele kwihlabathi loyilo; ukufunda, amathuba omsebenzi kunye nenye yezona zinto zibalulekileyo, Ufumana malini umyili wegraphic eSpain?
1 Yintoni ekufuneka uyifunde ukuze ube ngumyili wegraphic?
2 Ukuphuma emsebenzini
3 Ufumana malini umyili wegraphic eSpain?
4 Wenza malini umzobi ozimeleyo?
Yintoni ekufuneka uyifunde ukuze ube ngumyili wegraphic?
Ukuba injongo yakho kukuba ngumyili wegraphic, kufuneka uqale ngokufunda a Isidanga soYilo lomzobo. Ngaphandle kokuba uqale wafunda i-baccalaureate yobugcisa okanye unxibelelana neli hlabathi, nokuba kungezifundo, izikolo okanye imisebenzi enxulumene nalo.
Ngaphakathi kwesiDanga kuYilo lweMizobo sinokwahlula amasebe ahlukeneyo ngokuxhomekeke kwizifundo ezikhethiweyo okanye nakwiiyunivesithi ezithile iidigri ezikhethekileyo ezifana nefashoni, ingaphakathi, uyilo olusetiyo, uyilo lwemveliso, njl.njl.
La inqaku lenkundla lokufikelela kwezi zidanga zaseyunivesithi Kuya kuxhomekeka kwiyunivesiti ofuna ukufikelela kuyo kunye nohlobo lwesidanga, aluyi kufana kwidigri yoyilo njengakwisidanga soyilo lwefashoni.
Kwelinye icala, ukuba awukwazi ukufikelela okanye awunamdla wokwenza isidanga saseyunivesithi, kukho iindlela ezininzi onokukhetha kuzo ukuze uzinikele ekuyileni. Ungafikelela amabanga aphakathi okanye aphezulu ahlukeneyo ukuba ezinxulumene kweli hlabathi okanye noqeqesho ngokwakho ngokusebenzisa iikhosi okanye izifundo kodwa uhlala ukhumbula ukuba ngendlela yokugqibela kunokuba nzima ngakumbi ukufikelela kwinkqubo yabasebenzi ngaphandle kokuya kwi-internship njengoko inikezelwa zezinye izifundo.
Ukufunda uyilo lwegraphic kukuvumela ukuba ube neprofayile yemisebenzi emininzi kwaye ke ngoko ukukwazi ukusebenza kumacandelo ahlukeneyo. Omnye wemisebenzi eqhelekileyo yabaqulunqi inxulumene nophuhliso lwezazisi zenkampani, amaphulo onxibelelwano, uphuhliso lwezinto zokubhala, njl. Ayikokuphakamisa nje a mfa nekiso kwaye ulibale, kodwa ibandakanya okuninzi okufana nokufundwa kokhuphiswano, umbala, ukuchwetheza, ixhasa indawo yokusetyenziswa, ukuhanjiswa, njl.
Ukuyila kumaphepha ewebhu, yindawo apho abaqulunqi begraphic abaninzi nangaphezulu babonwa, kodwa ngenxa yoko bafuna uqeqesho kwi-SEO, ulwazi lwewebhu, ikhowudi yekhompyutha ...
La isithembiso somsebenzi kwizindlu zopapasho sibanzi kakhulu kubayili begraphic, bajongene noyilo, amaqweqwe oyilo kunye ne-infographics kwaye sinokuzibona besenza iicomics okanye iincwadi zabantwana ngenxa yolwazi lwabo kwimizekeliso.
Eminye imisebenzi emibini ebalulekileyo yabayili begraphic uyilo lokupakisha kunye nophuhliso lomdlalo wevidiyo.
Ufumana malini umyili wegraphic eSpain?
Njengoko sele sikhankanyile umyili wegraphic une iprofayile eguquguqukayo kakhulu, inokuba ngaphakathi kwemimandla emininzi yoyilo. Ngokuxhomekeke kwindawo okuyo, uya kufumana imali enye okanye enye, namhlanje enye yeyona ndawo ihlawulweyo yindawo yedijithali.
Uhlobo lwenkampani osebenza kuyo lubalulekile, kwi-studio encinci okanye kwisebe loyilo lwenkampani enkulu enokubonelela ngemivuzo engcono.
Ukuze ube nethuba lokufumana umvuzo ongcono okanye uqeshwe yi-arhente enkulu yentengiso, umzobi kufuneka yenza i-niche, igama kwicandeloOku kuphunyezwa ngokusebenza rhoqo.
Enye into enokwenzeka kukuba umzobi uthatha isigqibo sokusebenza yedwa, eyaziwa ngokuba wezifanekiso. Kule meko, ngumyili ngokwakhe owenza izigqibo zokumisela amaxabiso akhe, iiyure zokusebenza kunye nabaxhasi abaza kusebenza nabo.
Ukubuyela kumxholo, uzuza malini umyili wegraphic eSpain, amanani aphakathi 1500 kunye 1800 euro ngenyanga. Ukuba sithetha ngomyili oqala ukusebenza kwi-internship, sithetha nge-500-950 ye-euro ngenyanga kunye nomyili ophezulu phakathi kwe-2500 kunye ne-3000 phantse.
Nje ukuba umyili wegraphic egqibe ixesha le-internship, unokuqeshwa yinkampani ayenze kuyo i-internship. Umvuzo ulingana okanye uphezulu kunomvuzo omncinci we-Spanish interprofessional opapashwe yi-BOE, kulo nyaka usuka kwi-980 euro ukuya kwiwaka.
Olu luhlu lulandelayo lubonisa uqikelelo lomvuzo ngonyaka, lwahlulwe lwaba ziintlawulo ezili-14, ezinokufunyanwa ngumyili ngokusekelwe kumava omsebenzi abanawo.
Ukususela kwi-0 ukuya kwi-2 iminyaka yamava: umvuzo wonyaka we-14000 euro
Ukususela kwi-2 ukuya kwi-5 iminyaka yamava: umvuzo wonyaka we-18620 euro
Ukususela kwi-5 ukuya kwi-10 iminyaka yamava: umvuzo wonyaka we-27.395.9 euro
Ukususela kwi-10 ukuya kwi-15 iminyaka yamava: umvuzo wonyaka we-33320 euro
Ukususela kwi-15 ukuya kwi-20 iminyaka yamava: umvuzo wonyaka we-36400 euro
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava: umvuzo wonyaka we-39340 euros
hlala ukhumbula ukhuphiswano olukhulu olukhoyo kweli candelo kuba yintoni ebangela ukuba kucuthwe umvuzo.
Wenza malini umzobi ozimeleyo?
Kwimeko apho ucinga ukuzintywilisela kwihlabathi loyilo lwegraphic njenge Unokuzihlawulela ngeeyure ezisetyenzisiweyo okanye ngeprojekthi, njengoko uyiphawula. Unokusebenzela ii-arhente zoyilo, intengiso, abapapashi, njl.
Kolu luhlu lulandelayo sikubonisa ukuba umzobi ozimeleyo angacela ntoni ngomsebenzi wakhe:
Uyilo lwepowusta: 250 euro
Incwadana okanye uyilo lweflaya: ukuya kuthi ga kwi-euro ezili-100
Uyilo lwencwadi yesazisi senkampani: ukusuka kwi-130 ukuya kwi-euro ezingama-250
Uyilo lwamagama: 650 euro
Uyilo lwentengiso: 450 euro
Uyilo lweVinyl: ukuya kuthi ga kwi-euro ezingama-250
Uyilo lokupakisha: 500 euro
Uyilo lwelogo kunye nomfanekiso wenkampani: 390 euros ipakethi esisiseko, ifikelela kwi-1000 yee-euro ngeyona nto igqibeleleyo
Uyilo olusisiseko lwephepha lewebhu: 450 euro
Uyilo lwekhasi lewebhu ngokwesiko: ukusuka kwi-800 euros
Ngeyure nganye esetyenziweyo umyili ozimeleyo unokuhlawulisa malunga ne-50 yee-euro, ezinye zibonelela iipakethi zeyure; umzekelo iiyure ezili-10 zomsebenzi we-400 euro.
Ngaba unomdla wokuba ngumyili wemizobo? Ewe, njengoko besikuxelele ngaphambili, eyona nto iphambili kukuba uqeqeshe, kuxhomekeke kulwazi okanye apho uvela khona kwinkalo yemfundo. Cinga kwaye ugxile kwisebe olithanda kakhulu, elitsala umdla wakho kwaye ngaloo ndlela uya kufezekisa amathuba amaninzi okufumana umsebenzi osemgangathweni kwaye ngokwenqanaba lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ufumana malini umyili wegraphic eSpain
Ndisayihleka le mirholo uyibekayo